Ezokuphepha ejwayelekile - Izisetshenziswa zeHaiber Play (iShanghai) Co, Ltd.
Ukuphepha kwezingane kuyinto edingeka kakhulu emapaki okuzijabulisa ngaphakathi, futhi kungumsebenzi wethu ukuklama nokukhiqiza amapaki okuzijabulisa ahlangabezana nalezi zindinganiso.
E-Europe nase-United States nakwezinye izifunda ezithuthukile, ngenxa yokubaluleka kokuphepha ngaphakathi kanye neminyaka yemakethe evuthiwe yemakethe, ngakho-ke enkundleni yokudlala yasendlini kunesistimu namazinga okuphepha aphelele, kancane kancane kwamukelwa kabanzi njengezindinganiso zokuphepha zomhlaba wonke.
Indawo yokudlala yasendlini eyakhiwe ngamagobolondo olwandle ihambisana ngokuphelele namazinga wokuphepha amakhulu emhlabeni afana ne-EN1176 ne-American I-ASTM, futhi isidlulile iMelika ASTM1918, EN1176nokuhlolwa kwesitifiketi sokuphepha se-AS4685. Izindinganiso zokuphepha zamazwe omhlaba esizilandela ekwakhiweni nasekukhiqizeni zibandakanya:
I-United States ASTM F1918-12
I-ASTM F1918-12 indinganiso yokuqala yokuphepha eyenzelwe ngqo izinkundla zokudlala zasendlini futhi ingelinye lamazinga okuphepha amukelwa emhlabeni wonke ezinkundla zokudlala zasendlini.
Zonke izinto ezisetshenziselwa ukuhamba kwezilwandle zidlule isilinganiso se-ASTM F963-17 somlilo nokuhlolwa okungekhona okunobuthi, futhi zonke izindawo zokudlala esizifakile eNyakatho Melika zidlulile izivivinyo zokuphepha nomlilo esifundeni. Ngaphezu kwalokho, sidlulile isilinganiso se-ASTM F1918-12 kwisezingeni lokuphepha, eliqinisekisa ukuthi ipaki lakho lingaphumelela ukuhlolwa kokuphepha kwendawo ukuthi kuyadingeka noma cha.
I-European Union EN 1176
I-EN 1176 indinganiso yokuphepha yezinkundla zokudlala zasekhaya nezangaphandle eYurophu futhi yamukelwa njengezinga lokuphepha elijwayelekile, yize kungagcini ekuphepheni okungaphakathi njengaku-astm1918-12.
Zonke izinto zethu zokwakha zidlulile ukuhlolwa kwe-EN1176 ejwayelekile. ENetherlands naseNorway, izindawo zethu zokudlala zamakhasimende ethu zidlulile ekuhlolweni okunamandla kwasendlini.
I-Australia AS 3533 & AS 4685
I-As3533 ne-AS4685 kungenye indlela evamile eyenzelwe ukuphepha kokuzijabulisa ngaphakathi. Senze nocwaningo olunemininingwane ngaleli zinga lokuphepha. Zonke izinto zokwakha zidlulile esivivinyweni, futhi wonke amazinga ahlanganiswe ekwakhiweni nasekufakweni kokukhiqizwa.